QAYBAHA MAANSADA - مركز الكتاب للبحوث والدراسات
نشرت بواسطة: Saacid Maxamed Kooshin في دراسات 23 مايو، 2019	0 2,305 زيارة
Af-Soomaaligu waa luuqad kamida luuqadaha dunida korkeeda looga hadlo, waana mid kamida afafka ugu muhiimsan geeska Africa.
Af-Soomaaligu waa luqo hodan ah geeskasta oo loo eego taasna waxaad ogaan kartaa markaad sii dhex gasho moolkeeda.
Waxaana looga hadlaa wadamo kala duwan sida Soomaaliya, Jabuti, waxaa kaloo si wayn loogaga hadlaa qaybo kamid ah wadamada Ethopia iyo Kenya.
Af-Soomaaligu waa af ay xuruuftiisu laatiin tahay dhawaaqiisuna uu carabi yahay.
Af-Soomaaliga waxaa la qoray sanadku markuu ahaa 1972.
Af-Soomaaligu lahjad ahaan waa labo qaybood oo kala ah 1.Af maay iyo 2.Af maxaa tiri.
Maxaa tiri: waa lahjada ugu caansan looguna isticmaalka badanyahay, af ahaana waa halbeegga Soomaaliyeed ee wax lagu barto waana kan qoran.
Lahjada Maay: waxaa inta badan looga hadlaa Koonfurta Soomaaliya meelo kamid ah.
Af-Soomaaligu guud ahaan waxa uu u qaybsamaa labo qaybood oo waaweyn oo kala ah Tix iyo Tiraab ama hadal iyo murti.
Waa maxay Tiraab?
Tiraabtu waa qayb hadalka kamid ah taas oo aan lahayn ridmo iyo qaafiyad u gaar ah, sidoo kalena ma ay jirto xaraf ay ku socoto. Tiraabtu waxa ay ka koobantahay Murti, Sheeko, Googaalaysi, Oraah iyo qayb kamid ah Maahmaahyada.
Waa maxay Tix?
Tixdu waa qayb hadalka kamid ah waxayna leedahay xeerar u gaar ah iyo qaafiyad u gooniya oo badanaa xaraf ku socda isla markaasna tuduca horay ama dhexda ka gala kuna soo noqnoqda ilaa labo, saddex ama afar jeer. Tixdu waa suugaan, suugaantuna waa maanso, maansaduna waxay ka koobantahay qaybo badan, waxaana ugu waaweyn:
Gabaygu waa boqorka maansada, waa madaxa suugaanta.
Gabaygu waxa uu ka hadlaa wax hore u dhacay, waxa hada jooga iyo wax soo socda intaba. Gabaygu waa hadal murtiyeed taxan oo ka kooban beydad mid waliba isugu xiranyahay labo qaar oo leh qaafiyad iyo miisaan ka dhexeeya.
Khasab ma ahan gabaygu in uu dheeraado oo waxaa gabay noqonkara tix hal bayd ka kooban iyo wixii kasii badan, laakiin waxaa muhiim ah gabaygu in uu lahaado murti lagalasoo dhexbixi karo ama loo markhaati doonankaro maalinta raggu geedka shirka wada joogo, tusaale ahaan tixdii Qamaan Bulxan ee ay kujirtay
” baadida nin baa kula daydaya daalna kaa badane
Aan doonahayn inaad heshana daa’im abidkaaye
Dadkuna moodi duul wada dhashoon wax u dahsoonayne”.
Haddaba aan idiinso bandhigo tusaaleyaal kale oo koob kooban, si aan idiin tuso badnaan iyo yaraan in uusan gabaygu kala lahayn.
“Aduun gabana ubad wada hablaa oori kululaatay
Waa waxaan sidaa ula engagay urugadoodiiye
Ilma adeeradaa geela waa igu agmaalaan
Ayaantii kastana boostadaan ku agwareegaa
Haddaan aradka gaalada fadhiyo kuma ilaaween
Haddaan aabahaa ahay maxaad ii anficiwayday”.
Gabyaa kalena wuxuu yiri:
“Lacagtaan maqdarad gaynayo een magac ku doonaayo
Alle magane maan hooyadey maro usoo siisto”.
“Istaageerid bay laba gacmood tabar kuyeeshaan
Hadday midigtu kali taagantahay tahar ma goyseen”.
Yawle wuxuu yiri:
“Ninkii madi ahaadaaba waa maxamadow quuse
Ma magoolo geed kaliyahoo milic ku yaallaaye
Inkastuu mayay qooyo waa muruxsanaadaaye”.
Cabdullahi Suldaan Timacade:
“Garbaduub haddii loo xiro ood gaarna ka ahaato
Gacantii ninlihi goynayaa waa gomodantaaye
Nin walaalki geed ugu jiraa geesi noqon waa”.
Maxamed Nuur Laangare:
“Indhooluhu ninkaa wada hadduu diido amarkiisa
Inakeen macruufkii hadduu amar kasii qaado
Usha inuu usii daayo soo wax u ekoon maahan”.
“Hadday dunidu tiir leedahoo lagu tanaadaayo
Oo niman ku taajirahayaan taaladan aan joogno
Toolmoonihii Maxamed baan laga taxaabeene
Ogoobay turaab lama gasheen Nebigii toosnaaye
Maxaan toban riyaad uga welweli tay u meel li’iye”.
Haddii aan Af-Soomaaliga u kala qaadnay labo qaybood oo waaweyn, gabaygu wuxuu ka tirsanyahay qaybaha tixda lagu magacaabo. Abwaankii caanka ahaa ee kamid ahaa boqoradii maansada Soomaaliyeed Raage Ugaas waa tuu isagoo arintaas inoo caddeynaya lahaa “Hadal waa tiraab iyo tix uun, waxaad tiraahdaaye.” Oo uu ula jeedo hadalkasta oo afkaaga kasoo baxa inuu labadaas mid uun yahay.
Gabaygu qaran ahaan waa hadal, qabiil ahaanna waa suugaan, qoys ahaanna waa maanso, qof ahaanna waa gabay. Hadal wuxuu kaga tagay wixii aan murti ahayn ee hadal uun iska ah, suugaanna wuxuu kaga tagay sheeko, maahmaah, majaajilo, iwm. Maansana wuxuu kaga tagay geeraar, jiifto, buraanbur iyo dhammaan noocyada heesta. Mudooyinkii hore, gabaygu waxa uu ahaa is-gaarsiinta ugu muhiimsanayd ee warka lagu kala qaadan jiray, sidoo kale wuxuu ahaa qayb kamida hantida xiligaas dadku haystay, maxaa yeelay gabaygu mararka qaarkood xoolo ayaa lagu heli jiray, gabdho ayaa lagu heli jiray, qadarin iyo qiima wayn bay bulshadii waa gaas u haysay qofka gabyaaga ah ee hibada ilaahay u siiyay.
Gabaygu waa hibo uu qofka Alle ku mannaysto ee aan la iska samaysan Karin ku dayashana ku imaan Karin.
Hadaba aan soo qaadano tixdii Abwaan C/laahi Macallin Dhoodaan, kaas oo daaha ka qaadaya in uusan ahayn gabaygu wax la is barikaro sida cilmiga kale, ama tababar lagu qaadan karo, dadaal iyo halw-kar nimana lagu hanan karo. Ee uu yahay deeq uu Alle qofkuu doono siiyo. Wuxuuna yiri Abwaanku:
–Dirqi gabaygu kuma fiicna iyo, waan darooryamiye
-Kaga dayasho door kuma noqdiyo, xaraf la doondoone
-Duxna kuma leh dheef lagu dalbiyo, ugu ducee ruuxe
– Dardarsiintu waw daran tahaye, marindaygaw uroone
– Darsi ma aha la is baro xigmadi, way da’ weyn tahaye
– War waa deeq Ilaahay baxshiyo, doobir gooni ahe.
Gabaygu uma baahna koox ka shaqaysa sida riwaayadaha, uma baahna taageerayaal badan oo ka daba jiibiya abwaanka alifa sida dhaantada iyo heesaha hawsha fududeeya sida ceel shubidda, uma baahna sacab iyo qalab kale oo loo garaaco si habdhacu u hagaago, uma baahna cag iyo jaan midna, umana baahna tifaftir iyo war hebelow isha iga mari.
Yuusuf Qabiili isagoo isna sifaynaya farqiga u dhexeeya gabayga shin-u-dhaladka ah iyo midka qoorqabadkaa ee xaraf doondoonka lagu sameeyo waa kii lahaa:
– Haddaan gabayga uurkoo bukiyo, arami kaa keenin
– Asaan olol jacayl iyo xanuun, kugu ijbaaraynin
– Afkuun baad kaleedee tixuhu, arar ma yeeshaane
Gabayga waxaa loo tiriyaa ama loo curiyaa ujeedooyin badan, waxaana ugu caansan:
Amaanta lafteeda ayaa dhowr jaad ah waxaana kamid ah amaanta dumarka, amaanta geela, amaanta fardaha Iwm.
Sidoo kale waxaa la arkaa in gabyaaga qudhiisu uu tiriyo tix uu isku amaanayo ama uu gabyaa kale ku amaanayo.
Digashadu waa marka gabyaagu uu arko qof cadawgiisa uu u arkayay oo maalintaas talo ka liicsantahay ama laga awood batay, inkasta oo aysan habooneyn in qof islaama oo dhibaataysan lagu digto hadana gabyaagu waxay u ahaayeen arimahaasi kuwo iska caadiya malaha diin ahaana uma aaminsanayn in qof lagu digto inay sax tahaye waa waxay caro iyo xinifi ka keentay baan oran karaa.
Tusaale aan usoo qaadano tix digasho ahayd oo uu tiriyey abwaankii waynaa ee la oran jiray Cali Aadan Gorayo (Cali Dhuux) isagoo ku diganayey darwiishkii misana gabyaaga ahaa ee Sayid Max’ed C/lle Xasan, wuxuu yiri Cali dhuux:
Waa lagu digtaa duul hadduu kuu darnaan jiraye
Daaduunka uu Maxamed qabo waan ku diirsadaye
Inkasta oo uu gadaalkii danbe Cali dhuux ka towbad keenay hadana xilliyadaas aad buu ugu diirsanjiray dhabar-jabka wadaadka.
Guhaanku waa gabay habaar ah, nin la oran jiray ina Weysaxume oo goobihii daraawiishtu ka talinjirtay deganaa ayaa waxaa la wariyaa in ninkaas uu xoolo ka dhacay Koofil ninkii la oranjiray ee ahaa hogaamiyihii ciidamada ingiriiska xilligaas. Waxaa nagasoo gaartay tixdan uu ku guhaamay Koofil waana tan:
“Sayidkoo wax galay raacdadoo la iskusoo gaaray
Adiga iyo gubniga aad wadaa gobotaal noqo e
Gidligaanku kaa joogsay oo guuxa kaa damiye
Afkuna gow kuyiri xaajadaad gees u badisaaye
Guga ha gaarin adigaa tolkay gaajadaas badaye”.
Sida taariikhda ku xusan ina Weysaxume Ilaahay habaarkiisi waa u aqbalay isla waayihiina gaalkii Koofil six foolxun baa loo dilay
Maansada Soomaalida aad bay uga dhex muuqataa qaybtani, waxaa la heli karaa maanso gabay iyo geeraarba leh oo si talaxtag ah jaceylka loogu xusayo. Waxaan shaki la galinkarin marba haddii gabay iyo jacayl meesha soo wada galeen in aan Raage Ugaas magaciisa iyo mirihiisaba aan meesha laga waayeyn
Run ahaantii Raage Ugaas wuxuu kamid yahay Abwaanada Soomaaliyeed ee qaybtan jaceylka looga danbeeyay, tixo dhowra oo arimahaas la xiriirana laga hayo, khaas ahaan qaybta calaacalka loo yaqaan.
Waxaa la wariyaa in Raage Ugaas gabar u doonanayd oo qurux Illaahay ku manaystay aadna uu u jeclaa loo meheriyey Faarax Wiil-waal. Warkii
Markuu Raage soo gaaray ayuu jiif iyo joogba diiday, kadibna tiriyey gabaygan layidhaahdo Alleyl Dumay kana mid ah tixihiisi jacaylka ahaa.
Xilligaas way adkayd in guur iska daaye lahawaysto gabadh u doonan nin kale khaasatan rag-adagaaga, nin karmeedka, haday dhacdana waxaa lafilan jiray halaag, basbeel iyo moore-duug waana kan gabaygii.
Onkad yeeray uugaama roob, alif banaadiikh ah
Raggase araxda iyo ooftu waa udub dhexaadkiiye
Orod uma holado ooglihii araxda beelaaye
Sidii inan yar oo hooyadeed aakhiro u hoyatay
Nin ugaas walaalkii yahoo eeday baan ahaye
Afdhabaandhow aayara ninkaa aamusaan ahay.
Bal aan eegno qaybo kamida tixihii jaceylka ahaa ee boqorkii jaceylka Cilmi Ismaaciil Liibaan (Cilmi Boodhari)
Ayadoon xabaal lagu ham siin waanan ka harayne
Kana waa tusaale kale oo kamida gabayadii Cilmi:
Dayax iiga muuqdheer
Nimanyow dabuub gabay beryahan kuma danuukhayne
Kolba aniga oo daayey baad igu diraysaane
Idin diidi maayee waxaan dood u celin waayey
Mid duushoo yarbaa Eebahay iigu daw galayey
Dalaalimo habeenkii haddaan meel dudo ah seexdo
Dayax iiga muuqdheer midduu duunku caashaqaye
Iga daaya hadal qaadkeedu waa iiga darayaaye
Baroordiiqa waa jaadkale oo ka mid ah munaasibadaha laga maansoodo.
Qaybtani waa calaacal, wuxuuna kamidyahay qaybaha ugu tirada yar maansada Soomaalida ama marka loo eego dhinacyada kale ee gabayga sida: diradiraha, amaanta, guubaabada iwm. Qaybtan baroordiiqa loo yaqaan waxaa ka maansooday rag tiro yar oo ay kamidyihiin Raage Ugaas, Cali Jaamac Haabiil, Xasan shiil iyo gabyaagii la oranjiray Yuusuf Ibraahin (Yuusuf dheere). Hadaba aan soo qaadano tix baroordiiq ah oo uu tiriyay Raage Ugaas. Sida lasheegay Raage ugaas wuxuu gabaygan ka tiriyey geeridii xaaskiisii Faadumo ee uu sida xad dhaafka ah u jeclaa qalbigiisana ku daabacnayd.
Raage Ugaas (Gabay baroordiiq)
Sida koorta Yucub oo la suray, koromo buubaal ah
Ama koox arda ah, oo quraan kaadibka u toostay
Ama beelo kaynaan ah, oo kor u hayaamaaya
Ama geel ka reeboo nirgaha, laga ka xaynaayo
Ama habar kurkii keli ahaa, lagaga kaw siiyay
Kanbalkiyo ardaagii miyaa, laygu kaliyeeyay?
Wixii rag igu kuunyay miyaa, igu karaamoobay?
Maantana kataantii miyaa, layga kala tuuray?
Kun iyo kow kurtood dumar haddii laysku wada keeno
Kolna waxaan la helahayn haween faadumoo kale e
Cali Jaamac Haabiil: (Gabay baroordiiq )
Dar guryii ka yimid baa war baas iila soo galaye
Geb hadday maritidu soo tidhaa goor uu nala joogo
Adduunyadatan laga guurayo ee gebegebada taagan
Ee laga galbaday meesha iyo geeridii Maxamed (scw)
Oo geesta Nebigii i mari maanta lays gurayo (scw)
Labadan qaybood ee guubaabada iyo Diradiruhu way iskusoo dhawyihiin xagga ujeedka, laakiin waxa ay ku kala duwanyihiin gabayga guubaabada ah waxa uu noqonkaraa mid wadani ah oo si guud umad ama dawlad uu gabyaagu u guubaabsho. Balse Soomaalidu inta badan gabayada guubaabada ah iyada dhexdeeda ayaa isku adeegsanjirtay. Halka uu gabayga Diradiraha ahi uusan marnaba asagu wanaagsanayn. Sababtoo ah gabayga Diradiruhu markasta laba reer ama laba ruux ayuu iska hor keenayaa, taasna ma bannaana.
Waxaa si farshaxanimo leh uga maansooday siyaabaha maansada loo curiyo Ibraahim Sh. Saleebaan (Ibraahim Garle) wuxuuna yiri:
“Maansoy nin kugu duul
Nina maalin kugu dood
Nina dhuuni kaa doon
Nina darajo kaa dhigay
Nina nabarka kugu damaq
Nina dakharka kugu dhayay
Nina doogta kugu kici
Nina ololka kugu dami
Nina nabada kugu didi
Nina balada kugu dadab
Nina dookha caashaqa Kaadhigay daf lootumo…”
Waa maxay Geeraarku?
Geeraar: – waa martabada labaad ee maansada marka laga yimaado gabayga. Waxa gabayga lagaga soocaa qaab dhismeedka iyo dhererka meeriska. Geeraarku wuu mar dhacaa.
Tusaale geeraar (Cali Bucul “amaan faras”.)
Gammaan waa magac duudoo
Sanga aan gabanayniyo
Magaankii godonaa iyo
Geenyadii dhadigayd baa
Gabigood ka dhaxaysoo
Haybta way isku gartaan
Waa maxay Jiiftadu?
Jiiftadu waa qaybkale oo kamida qaybaha maansada.
Jiiftadu waxay kaga duwantahay mansooyiinka kale gaabnida meeriska iyo habdhaceeda oo kooban. Waxa inta badan loo isticmaalaa heesaha iyo afarayda la is dhaafsado ruwaayadaha. Qaafiyada xarafku waa inuu ugu yaraan hal mar ku jiro bayd kaste.
Tusaale waxa kamida (Mirihii Axmad Saleebaan Bidde ee uu ku luuqaynjiray Maxamad Axmad kuluc)
Ubax guudka qariyay
Guntin mira ah leedahay
Oo soo gandoo doo
Oo godon barwaaqao ah
gacan webi ku yaala
halka aad i gaadhsiin………
MANSAFO ama Masafo
Waa maxay Mansafadu?
Mansafadu waxay kamid tahay bahaha maansada. Waxay jiiftada kaga duwantahay meeriska oo ka yara dheer jiiftada iyo habdhaca. Jiiftadu waa mar dhacdaa laakiin mansafadu way laba dhacdaa.
Tusaale waxa kamida (Xaaji aadan afqalooc, silsiladii “Siinley”.)
Ma seexane cambaro sagal samaday u boodaye
Sahankeedu wuxu gaaray saxalkiyo mariikhee
Subax noolba waxa jooga saacad qura ma moogine
Sabrina mayso jeerooy suuban u ciyaartee
Siciida iyo deeqina sacabka way ka boodiye
Wuxu soo sidaa odagu waa siyaakhadoodee
Siinka iyo saadkaad kala sooci waydee
Ninka soo socda ha celin sarbeeb weeye heestuye
Waa maxay Buraanburku?
Buraanbur: – buraanburku waa qayb kamida maansada soomaalida. Wuxu gaar u yahay dumarka, waxana la tiriyaa wakhtiyada farxada iyo guubaabinta. Wuxu leeyahay meeris iyo qaabdhac gooniya iyo qaafiyada oo laga bixi karo, taasina waxa weeyaan in xarafkii ay qaafiyadu ku socotay laga bixi karo oo marka dhawr bayd la tiriyaba xarafka kale la galayo.
Tusaale waxa kamida (Cibaado maxamad)
Hooyo iisoo dhawow dhegta iga maqal
Dhawaaqaan irina dheeldheel ayaanu noqon
Been ha u qaadan beerkuu kasoo go’ee
Ceebta waa laga fogaadaaye feejignow
Ayaanu ceeshoonin wiilkaa kusoo calmaday
Ciidan wuxu kariyay cunnadiisu yaanay noqon
Inta xigtada u ah iyo gacalka wada xurmee
Waa maxay Guurowgu?
Guurow:- guurowgu waa gabay ama godka gabayga ayuu soo galayaa. Meeriska iyo habdhacaba way isku dhawyihiin, laakiin sida loogu luuqeeyo ayuu kaga duwanyahay gabayga. Waxana inta badan laga isticmaalaa koonfurta soomaaliya.
Tusaale: ( Shamso Cali Macallin )
Soomaaliyay toos su’aashayda dhegansada
Sarbeebtiyo tusaalaha waa inaad la socotiin
Sokeeyiyo xigaaliyo wiil iyo seediyaa nahay
Sodoh iyo igaarkeed
Soomaaliyoo idil kala soocmimaysee xarig soohanaa nahay
Sidii hore si dhaanteey umaddaan sugaysee horta ma u samaynaa
Sacabkoo la tuma iyo ayidaa saxiixee qalin ma isa saarnaa
Soomliyeey toos hawsha saas halagu wadeey….
Waa maxay Shiribku?
Shiribku wuxuu isaguna kamid yahay bahda maansada. Wuxu leeyahay miisaan iyo meeris gooniya, waxaana lagu gartaa qaabka loogu luuqeeyo.
Tusaale waxa kamida.
Hogaankii dalka waa heblow, idinna waa hor joogsateen
Haramacas hilib qaatayaad, kadaba habhab leedihiin
Hub cusub ninka soo heloo, heshiiska diiday waa heshaa
Hadaad ka hilba hugsateen, himiladiinii waa hesheen
Waa maxay Saarku?
Saar:- inta badan saarka aad looma adeegsado, waxa isticmaali jiray sugaanyankii la oranjiray Carays Ciise Kaarshe Allaheha u naxariistee. Waxa loo qaada qaab gooniya oo isaga u gaar ah.
Tusaale waxa kamida (Carays Ciise Kaarshe)
Siin looxaa lagu dhigaa
Sadar waa la akhriyaa
Socdaal waa loo kacaa
Sakada waa lala baxaa
San waa laga neefsadaa
Sariir waa lagu hurdaa
Sidii kale waxan lahaa.
Saacid Maxamed Kooshin
السابق: Oprah Winfrey, Gabadhii guusha hanatay
التالي: SAKADA FIDRIGA & FIQIGA MAANTA – SOOMAALIYA
عن Saacid Maxamed Kooshin
بواسطة Saacid Maxamed Kooshin